» बानियालाई जनताले नालायक भन्लान् भन्ने पीर !
बानियालाई जनताले नालायक भन्लान् भन्ने पीर !
१८ माघ २०७५, शुक्रबार २०:५८
मकवानपुर । प्रदेश ३ का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरका सभापति इन्द्रबहादुर बानियालाई जनताले आफूलाई नालायक भन्लान भन्ने पीर परेको छ । प्रदेशसभाको एक वर्षका बिचमा जनताको हितमा आफूहरुले काम गर्न नसकेकाले आफूहरु जनताको नजरमा नालायक ठहरिने त होइन भन्नेमा उनलाई पीर लागेको हो । नेता बानियाले शुक्रबार प्रदेशसभाको पहिलो वार्षिकात्सव कार्यक्रममा आफुहरुलाई जनताले नालायक भन्न थालिसकेको दुःखेसो पोखे ।
प्रदेशसभाको एक वर्ष वितिसक्दा समेत प्रदेशको राजधानी तोक्न र नामाकरण गर्न समेत नसकेकाले जनताले आफूहरु प्रति भरोसा गर्न छाड्न थाल्ने त होइन भन्ने बानियाको भनाई थियो । जनताको मतले जितेपछि जनतालाई चित्त बुझाउने गरी काम गर्न नसक्नुको पीर सायद बानियालाई परेको हुनसक्छ । यसैले उनले जनताको नालायक बन्नुभन्दा राम्रो काम गर्नुपर्ने कुरा बताएका हुनसक्छन् ।
कम्युनिष्टको दुई तिहाई मत हुँदा समेत प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको विषयमा कुनै धारणा नआउनु लज्जाको विषय भएको उनको भनाई छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा प्रदेश राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र सार्न नहुने बताएका बानियाले सभाका पहिलो वार्षिकोत्सवमा सरकारलाई प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न किन ढिलाई गरेको भन्ने प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारको काम गराई प्रभावकारी नभएको उनको आरोप थियो ।